Samsung mere Galaxy A31 gọọmentị: 6,4 "panel na batrị 5.000 mAh | Androidsis
Samsung mere Galaxy A31 gọọmentị: 6,4 ″ panel na batrị 5.000 mAh
Samsung na-ekwusi ike nghazi nke ọtụtụ ọdụ na etiti ọnwa a na ọnwa Machị. The South Korean emewo ka atọ n'etiti-nso-ngwaọrụ ngwaọrụ ukara ke idak urua kiet na ngosi nke Samsung A41 AX, Samsung Galaxy M21 y Samsung A11 AX.
Ugbu a ụlọ ọrụ kpebiri na eze na-akpọsa Galaxy A31, ọnụ nke dị n'etiti A11 na A41, ịbụ nhọrọ na mmasị n'ihi nnukwu nnwere onwe ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ pụtara na mpaghara ndị ọzọ dịka foto, ebe ọ nwere ihe mmetụta anọ dị n'azụ.
Nlereanya Galaxy A41
Ihuenyo 6 Super AMOLED 4 sentimita asatọ na FullHD + mkpebi na 2.400 x 1.080 pikselụ 20: 9 ruru
Nhazi Octa-isi 2 GHz processor
Nchekwa n'ime 64/128 GB nke nchekwa gbasaa site na MicroSD ruo 512 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 48 MP f / 2.0 isi ihe mmetụta nke abụọ mbara n'akuku 8 MP f / 2.2 5 MP f / 2.4 omimi ihe omimi na 5 MP f / 2.4 nnukwu ihe mmetụta.
Igwe n'ihu 20 MP f / 2.2 mmetụta
Njikọ 4G Wi-Fi Bluetooth NFC Njikọ USB-C na jaak 3.5 mm
Batrị 5.000 mAh na 15W ngwa ngwa
Akụkụ 159 x 73 x 8 mm
Ibu ibu 185 g
Ahịa Kpebisiri ike
1 Main atụmatụ nke Galaxy A31
Main atụmatụ nke Galaxy A31
El Samsung A31 AX na-enwu site na ihuenyo Super AMOLED nke 6,4 nke anụ ọhịa ahụ nwere mkpebi nke 2.400 x 1.080 pikselụ (FullHD +), akara ngosi a bụ »U» iji tinye ihe mmetụta nke selfie. Ihe mkpisiaka na-agụ na-aghọ ihu, n'okpuru ihuenyo ma ọ bụghị n'azụ dị ka ọ bụ ihe a na-ahụkarị.
Onye na - arụ ọrụ ekwentị ga - enye ụdị RAM na nchekwa abụọ, nke mbụ bụ 4 GB nke RAM na 64 GB, nke abụọ nke 6 GB nke RAM na 128 GB, mana enwere ike ịgbasa ya site na ịnwe oghere MicroSD na elu na mgbakwunye 512GB.
Samsung na-etinye ihe nhazi asatọ, abụọ n'ime ha na-arụ ọrụ na 2 GHz na isii ndị fọdụrụ na 1,7 GHz, ya mere ọ chọrọ ịbụ Helio P65 by Onyeka Onwenu Batrị nke ekwentị A31 bụ 5.000 mAh nke nwere ngwa ngwa ngwa nke 15W, ọ bụ otu n'ime isi ihe dị na ekwentị ọhụrụ a.
Ọ bụrụ na ihe nwekwara guzo Galaxy A31 Ọ dị na okwu nke ese foto, nke isi bụ 48 MP, nke abụọ bụ 8 MP n'obosara n'akuku, nke atọ bụ 5 MP omimi ihe mmetụta na nke anọ bụ 5 MP nnukwu. Igwefoto selfie dị n'ihu bụ megapixels 20, kpọmkwem n'okpuru ọkwa ahụ.
El Samsung Galaxy A41 sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana sistemu gam akporo 10 Na otu UI 2.0 oyi akwa, ọ na-ekwe nkwa mmelite otu gam akporo 11 ga-adị, ebe ọ ka dị na mbipute 2 maka ndị mmepe. Ọ nwere njikọta 4G, WiFi, Bluetooth, NFC na 3,5mm maka ekweisi.
Phonedị ekwentị ọhụrụ a ga-abịa na agba anọ dị, ojii, ọcha, ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ. Samsung akwadobeghị nnweta ya ma ọ bụ ọnụahịa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung mere Galaxy A31 gọọmentị: 6,4 ″ panel na batrị 5.000 mAh
Etu esi egosiputa egwu egwu na egwu YouTube
Redmi na-ekwupụta Smart TV MAX, TV nke 98-inch nwere PatchWall